Malagasy… tia tanindrazana, tia fandrosoana | NewsMada
Malagasy… tia tanindrazana, tia fandrosoana
“Malagasy aho: tia ny tanindrazako, tia ny fandrosoana.” Io ny lohahevitry ny fankalazana ny faha-59 taona niverenan’ny Fahaleovantena amin’izao. Vitan’ny fihetsiketsehana ivelany sy mandalo ihany ve sa ho tafalatsaka tanteraka anaty sy tena iainana mandavantaona? Kibo mitsara tena ny tsirairay fa ny ataon’ny tena ihany no mahasoa na maharatsy.
Na izany aza, mba tena mahatsiaro sy miaina ho Malagasy ve ny tsirairay? Mahalala sy mahay ny momba azy izany: ny tantaran’ny firenena, ny fomba amam-panao, ny taniny sy ny harena ao aminy na toekarena na saina… Tsy manao rapa-dango fahatany izany hoe mila averina na hiverenana nefa tsy manao valalan’amboa ka ny tompony aza tsy tia.
Arakaraka ny fahalalana ny zavatra iray no hanajana azy sy maha saro-piaro ny tena aminy? Toy ny fananana zavatra rehetra io: rehefa tsy ananana izay tiana, izay ananana no tiavina. Arakaraka ny hanajana azy koa no mampisy hasina azy, ary arakaraka ny hasina omena azy no hahazoany toerana eo amin’ny fiainana azy andavanandro mandavantaona.
Mampiasa teny malagasy ve, ohatra, ny tena eo amin’ny fiainana andavanandro, raha mbola azo atao? Sahy mijoro amin’ny maha Malagasy ny tena amin’izay rehetra atao fa tsy misolelaka na maka tahaka befahatany ny ataon’ny vahiny. Tompony mahazaka manana ny taniny fa tsy vitan’ny hoe mahalala fotsiny, na tompony mangataka atiny.
Ohatra ihany ireo eo amin’ny fiainana andavanandro. Mbola hafa indray ny raharaham-panjakana sy ny fitondrana: hatraiza, ohatra, ny fampiasana ny teny malagasy, iza no tompon’ny teny farany amin’izay atao na ny fanapahan-kevitra, ny manjaka amin’ny harem-pirenena sy ny tany… ? Hatramin’ny kolontsaina politika, kolontsaim-pihariana…
Tena mampandroso ny Malagasy tokoa ve ny hoe fitiavan-tanindrazana eto hatramin’izany? Lazaina mandrakariva ny hoe manankarena i Madagasikara fa ny vahoaka, mahantra. Nahoana loatra? Fandinihan-tena izao, fananana hambompo, fanapahan-kevitra, fifanomezan-tanana amin’ny firaisankina, fijoroana, fihetsehana… Mbola misy ny mampiombona?